“Pit-bulls” nanaikitra zazakely efatra taona, niteraka adihevitra momba ireo biby mirenireny ao Tiorkia · Global Voices teny Malagasy
“Pit-bulls” nanaikitra zazakely efatra taona, niteraka adihevitra momba ireo biby mirenireny ao Tiorkia
Maro ireo biby mpirenireny nosamborina taorian'ny kaikitra nataona 'pit-bulls'
Voadika ny 07 Janoary 2022 5:23 GMT
Saripika tao amin'ny Pixabay. Alika iray mpirenireny, any ambadiky ny fefy.
Nahatohina olona marobe tao amin'ny firenena ny tantara tamin'ny 22 Desambra tao amin'ny faritanin'i Gaziantep ao Tiorkia nanjo ny ankizivavy kely iray 4 taona nokaikerin‘ny alika ‘pit-bulls’ 2 tsy nifatotra, niteraka fitakiana sazy faran'izay henjana ho an'ny tompon'ireo alika roa. Saingy, andro vitsy taty aoriana, taitra ireo olompirenene rehefa niditra an-tsehatra tamin'ilay olana ny filoha Recep Tayyip Erdoğan, vao mainka niteraka fifanoherankevitra nisinisy kokoa. Raha niteny tamin'ny 25 Desambra tao Ankara, nangatahan'ny filoha ireo fari-piadidiana (kaominina) rehetra manerana ny firenena mba hanangona ireo alika mirenireny ka handefa azy ireny any amin'ireo toeram-pialofana sahaza azy. Nangatahan'ny filoha ihany koa ireo manana biby fiompy izay nantsoiny ho “Tiorka fotsy” — fomba fiteny iray ampiasaina hanondroana ireo olon-tsotra izay laika, Tandrefana, ary indrindra fa avy amin'ny hery ankavia — mba hikarakara ny bibin'izy ireo.
Marobe ireo tompona biby fiompy an-trano no naneho ny tsy hafaliany teny anaty sehatry ny media sôsialy, nanevateva ny filoha noho ny vava navoakany.
Mba hahatonga ahy ho Tiorka Fotsy ve ity bitro fotsy mahafatifaty ity?
Tsy azonao atao ny manameloka ho faty ireny biby ireny satria fotsiny hoe eny an-dalambe ry zareo no monina.
Efa ho herintaona izay, izahay dia fianakaviana iray miara-monina amina alika iray. Dia mino ve ianao raha toa hilazàko fa ahiako ho izahay no manaraka eo. Sugar no anaran'ilay kely eo amin'ny sary io, herintaona sy tapany izy. Tsy hain'lery akory hoe noho izy no nahatonga anay ho Tiorka Fotsy. Ary antenainay ny hanadino ity nofy ratsy ity indray andro any.
Nanoratra ho an'ny The Independent, ilay mpanao gazety Borzou Daragahi nanoratra hoe: “taorian'ny namaritany ny fanànana alika ho toy ny maripamantarana ara-kolontsaina, nasehon'Atoa. Erdoğan mibaribary izao ny fipetrahany anaty sehatry ny fankahalàna alika, ary dia nanaraka ny diany ireo famoaham-baovao mpomba ny fanjakàna, miantsoantso ny hamongorana ireo biby mpirenireny.” Taorian'ny niresahan'i Erdoğan tao Ankara, marobe ireo kaominina no nanomboka nandraoka ireo alika mpirenireny teny an'arabe.
Nalaky be ny horakoraky ny vahoaka, indrindra fa alika manana tompo ireo pit-bulls namely tamin'ny fomba feno habibiana ilay zazavavy kely, fa tsy alika mirenireny. Azo isaina amin'ny rantsan-tànana ireo fialofana manome fikarakaràna sahaza ho an'ireo alika mirenireny ao Tiorkia.
“Na heverin'i Erdoğan ho madio sy tontolo azo antoka aza ireo fialofana”, tsy izany velively no zavamisy. Avoitran'ireo saripika sy lahatsary alefan'ireo mpikatroka mpiaro ny zon'ny biby ny fepetram-piainana maharikoriko tsy maintsy iainan'ireo bibiy any. Amina tranga maro, betsaka ireo biby no matin'ny hanoanana, na aretina ao anatina trano tery sy maloto, ary indraindray vantany vao voavory avy eny an'arabe dia vonoin'ireo mpiasan'ny kaominina,” hoy ny tatitry ny Gazete Duvar.
Tanaty antsafa niarahana tamin'ny The Independent, Mine Vural, mpikatroka mpiaro zon'ny biby no sady teknisiàna veterinera ao Istanbul, niteny hoe: “amin'ny ankapobeny ao Tiorkia, toerana itobian'ny hirifirin-tsaina sy fahafatesana ho an'ireo biby ireny fialofana ireny.”
Ireo hafa, toy ilay mpisolovava, Hacer Gizem Karataş, avy amin'ny Animal Rights Watch Committee (HAKİM), nilaza fa ny fandefasana ireo biby mpirenireny ho any amin'ireo toby fialofana dia midika ho famonoana raha ny marina.
Noho ny baikon'i Erdogan, nangonina ireo alika. Tsy hay hoe ho entina aiza izy ireny, ary fepetra toy ny ahoana no hiainany any. Tsy misy fotodrafitrasa handraisana an-tànana biby mpirenireny miisa 7 tapitrisa eo ho eo, nofinofy fotsiny ilay lazain’-dry zareo hoe fialofana. Ireto ireo olona tonga io maraina io nanangona ireo biby nirenireny natory teny an-kianja. Tsy maintsy mijoro isika.
Ny pôlitika fiarovana ny biby ao Tiorkia
Tamin'ny 2004 i Tiorkia no nankatoa ny lalàna voalohany tao aminy ho fiarovana ny biby. Tamin'izany fotoana izany, nataony ho ara-drariny ny fomba (CNVR) fisamborana, ny famosirana, fanaovana vaksiny ary ny famerenana ireo biby. Voaràran'ilay tolodalàna ny famonoana ireo alika mirenireny raha tsy hoe “amina tranga voatondron'ny Lalàna 3285 momba ny Fitsirihana sy ny Fahasalaman'ny Biby.” Voarara ny Euthanasia (famonoana amin'ny fanafody) raha tsy hoe alika tratry ny “aretina tsy ahitana fanàfany sy miaina aretina mahafaty efa tonga amin'ny fetra farany.”
Nomena andraikitra ireo kaominina eny an-toerana mba hikarakara ireo alika eny an'arabe amin'ny fitondràna azy ireny ho any amin'ireo toby fialohana ambany fiahiana fikambanana, ka any no hamosirana, hanaovana vaksiny, hamerenana indray ireo alika, ary ametrahana ‘puce numérique ‘ amin'ny sofin'izy ireny, anomezana an-dry zareo laharana famantarana ho fanarahamaso azy.
Tamin'ny 2012, ny antoko nahazo ny fahefana “Rariny sy Fandrosoana” dia nanolotra tolodalàna “hanesorana eny an'arabe ireo biby mirenireny sy hametrahana azy ireny any amina toerana voatokana ivelan'ireo vohitra sy tanàndehibe.” Napetraka ilay tolodalàna taorian'ireo hetsipanoherana faobe. Ho an'ny maro io dia antontan-taratasin-dalàna mampahatsiaro ireo pôlitika tamin'ny 1910 nandefasan'ny Soltàna Mehmed V ireo alika mpirenireny an'arivony maro tao Istambul ho faty noana tany amina nosy iray tsy lavitra ny tanàna, mba “hanàna endrika tandrefana kokoa” ilay tanàna, taloha kelin'ny naharava ny ampira Ottoman.
Tamin'ny 2018, taorian'ny nahazoany fandresena tamin'ny fifidianana izay ho filohampirenena, nanome toky i Erdoğan fa hanamafy ireo lalàna fiarovana ny biby. Nony farany, tamin'ny 2021, nankatoavin'ny parlemanta tiorka ny volavolan-dalàna iray vaovao momba ny zon'ny biby. Raràn'ilay lalàna ny fivarotana saka sy alika any amin'ireo toerana fivarotana biby fiompy an-trano, tamin'ny fanasokajiana azy ireny hitovy amin'ny “manan'aina” fa tsy entambarotra, sy fanamelohana ny fomba fitondra ratsy ny biby ho azo saziana am-ponja hatramin'ny efatra taona. Ao anatin'ilay lalàna vaovao, ireo “pit bull terriers, Tosas”, ary ireo karazana alika hafa izay noheverina ho mampididoza dia noraràna ny miompy sy mivarotra azy. Ireo tratra mankahatra ny lalàna dia mety handoa onitra ara-bola. Takian'ilay lalàna ihany koa ireo tompona biby fiompy an-trano mba hanome karatra famantarana nomerika ho an'ireo bibiny. Ny 7 Desambra 2021, nasiana fanitsiana ilay lalàna fiarovana ny biby, itakiana amin'ireo tompona biby fiompy voakilasy ho “mampididoza” mba hamositra azy ireny sy hanoratra azy eny amin'ireo manampahefana, alohan'ny 4 Janoary 2022, hoy ny tatitry ny Daily Sabah.
Mandritra izany fotoana izany, mitohy mahazo fanohanana hatrany ireo fanentanana miantso ny fiarovana ireo biby eny an'arabe — #SokakHayvanlarıSahipsizDeğil [BibyAnArabeTsyHoeTsyMisyMpitaky]. Zavatra mahazatra ao Tiorkia ny mahita olona mikarakara ireo biby eny an'arabe amin'ny alàlan'ny fanomezana sakafo azy ireny sy fanamboarana trano ho azy ireny eny an'arabe. Ny sasany amin'ireny biby an'arabe ireny dia manana ny sarivongana natao ho azy manokana, raha ny hafa indray lasa “maskôty malaza” ho an'ireo kaominina ao an-toerana. Ary raha kely indrindra dia misy roa ireo sarimihetsika fanadihadiana, “Kedi” sy “Stray,” manoritsoritra ny fiainan'ireo biby eny an'arabe ao amin'ny firenena.